Ovao ny fitondran-tenan'ny mpanjifa amin'ny Badegeville | Bilaogy MarTech
Ny fahaizana manova ny fihetsiky ny mpanjifa dia mety ho ny masomboly masina an'ny e-mpivarotra. Fanamby iray amin'ny mpanjifa mandray anjara amin'ny tontolo iainana ankehitriny ny tsy fivadihan'izy ireo vetivety rehefa miatrika safidy maro. Mba hamahana izany, ny orinasa dia tsy maintsy manova paikady eny an-dalana na manome izay tadiavin'ny mpanjifa eo noho eo. Tsy azo atao izany matetika amin'ny loharanon-karena zara raha misy ankehitriny. Gamification dia paikady manampy ny mpivarotra amin'ireo ezaka ireo.
Orinasa gamification iray izay mihodina ankehitriny Badgeville. Badgeville vao haingana dia nandalo famatsiam-bola hafa, nahazo ny Wiki Gamification, ary natomboka mekanika sosialy. Badgeville dia manolotra fitaovana kely iray izay manome ny vahaolana amin'ireo olana maika ireo.
Badgeville dia mampihatra mekanika lalao, mekanika sosialy ary mekanika laza ary manara-maso ny lamina na fitondran-tena na ny mpitsidika tranokala. Ny rafitra matanjaka dia afaka mampiasa fandinihana mialoha hamaliana ny mpitsidika mifototra amin'ny zavatra heverin'ny mpitsidika fa mahaliana na mahaliana. Ao amin'ny ivon'ny Badgeville's gamification maranitra programa dia ny Behaviourt Platform izay manara-maso ny fitondran-tena ary mampihatra mekanika fampiroboroboana voaporofo hanatsarana ny fifandraisan'ny mpampiasa, hampifandray tsara kokoa ny mpanjifa ary hanatsara ny famokarana mpiasa.
Ity Behaviourt Platform ity dia misy fanangonana fitaovana sarobidy.
Ny behavioral engine dia mamantatra sy manome valisoa fitondran-tena be mpampiasa.
Mekanika fampiroboroboana manatsara ny fandraisan'anjaran'ny mpitsidika amin'ny alàlan'ny fampiharana ny valiny ara-potoana mba hanomezana lalao sosialy toy ny traikefa ho an'ny mpitsidika.
Ny fitondran-tena Analytics dia manome ny angon-drakitra miaraka amin'ny angon-drakitra sy fahitana izay mahatakatra ny orinasa ny fomba fandraisan'ny olona dikany miaraka amin'izy ireo.
Widget Studio & Developer Tools dia fitambarana fitaovana fampiroboroboana matanjaka mamela ny orinasa hametraka intuitive sy mahazaka Layers fampiroboroboana amin'ny interface-dry zareo.
Mba hametrahana gamification amin'ireo mpanjifa sy mpiasa ao amin'ny orinasa, Badgeville dia manolotra Frameworks enina enina, izay vahaolana omena turnkey izay mihazakazaka singa samihafa amin'ny Sehatra fitondran-tena.
The Rafitra Core Gamification mamela ny orinasa hampiasa gamification amin'ny fifandraisana mahazatra amin'ny mpanjifa na olon-tsotra.
The Rafitra manam-pahaizana momba ny fiarahamonina mampanan-karena ireo seha-piarahamonina.
The Rafitra Piramida mifaninana milaza amin'ny orinasa iza no fandaharan'asa mifantoka amin'ny mpanjifa no miasa tsara indrindra.
The Rafitra Torolàlana malefaka mamela ny orinasa hametraka fandrisihana ho an'ny mpanjifa na ny mpiasa hiditra amin'ny fitondran-tena irina.
The Rafitra fiaraha-miasa amin'ny vondrom-piarahamonina manampy ny orinasa hampiasa teknolojia orinasa sosialy tsara kokoa amin'ny alàlan'ny rafitra valisoa.
The Rafitra fanambin'ny orinasa mety ho valin'ny vavaka HR ihany, satria mamela ny famoronana fifaninanana mahafinaritra sy fanomezana izay mikendry ny hampitombo ny fifamatorana eo amin'ireo mpiasa ary amin'izany hanatsarana ny vokatra sy ny fitondran-tena.
Badgeville koa dia manolotra Widget Studio - fanangonana widget misy gamification tsy azo ovaina sy azo ovaina. Ireo widgets ireo dia misy ny takelaka fampirantiana, fampisehoana fampisehoana zava-bita, hetsika an-tranonkala amin'ny toerana tena izy, laharam-pisian'ny namana, mini-profil lohateny, fampandrenesana ary maro hafa.
Miasa miaraka amin'i Yammer